DAAWO-Reer Garoowe iyo Boosaaso oo Soo Dhoweeyey Wasiirada Cusub & Reer Sanaag oo Dhaliilay Saamiga La Siiyey.
February 11, 2019 puntlandnews
Puntlandnews.net (Garoowe)-Kadib magacaabistii golaha cusub ee wasiirada dowladda Puntland waxaa saacadihii ugu dambeeyey aad u soo badanayey aragtida shacabka ee baraha ay bulshadu ku xiriirto.
Shacabka Puntland ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyey xubnaha cusub ee golaha wasiirada dowladda Puntland, waxaana dhalinyarada ka soo jeeda deegaamada qaar ay ahaayeen kuwa dhaliilay waxqaybsiga awoodda beelaha ee golaha wasiirada Puntland.
Reer Sanaag iyo Haylaan ayaa aad u dhaliilay saamiga laga siiyey xubnaha cusub ee golaha wasiirada dowladda Puntland marka loo eego deegaamada kale ee Puntland, sida lagu qoray baro badan oo kamid ah kuwa bulshadu ku xiriirto.
Garoowe iyo Boosaaso ayaa siweyn looga soo dhoweeyey golaha cusub ee wasiirada dowladda Puntland, waxaana shacabka qaar sheegeen in xukuumadda cusub fursad lasiiyo lagulana xisaabtamo wixii ay u qabato bulshada Puntland.
Warsangeli waa 90% argagaxisada Puntland ka jidha. Hade beel ayada AL QAACIDA ku xiran wasiir ma la siin kadho ila ay ayada ka laabato la shaqeynta argagaxisada.
Garaadka Guud says:
Doqoon batahay vid lagumagii Mayo Carlow.
Sumadadana wa miss ad ka benshegayso adliga Shaaba.
Caqligaga lita ciidna wax kumayeli kartide dabada daado uf bathy
9 wasiir waa majerteen
Waa 17 Harti
Dadkii kale ee Puntland deganaa waxba looma hambeyn